Unqulo & Umoya Inkolo yamaSilamsi
Intsingiselo ethi "Usuku olutsha" kwiintlobo zaso ezicebileyo kunye neentlobo ezahlukeneyo, i-Nowrūz (isichazo sokuthi ukuvakalisa igama elikhethiweyo) yindawo enkulu yeeholide yasePersi-Iranian ne-Central Asia. Iphawula umnyaka omtsha njengokuba ufuziselwe yi-equinox yesine, ekuqaleni kwentwasahlobo.
Imvelaphi eyiyo yeeholide ayiyaziwayo njengoko ibuyele kwiminyaka engama-3 000 ukuya kwisiko seZoroastrian kunye neengoma zamaPersi, ngaphambi kwexesha lamaSilamsi. Emva ko-1979 uguquko lwamaSilamsi, u-Ayatollah Ruholla Khomeini wazama ukugxotha imikhosi yaseNewuz, ebabona (ngenxa yexesha labo elidlulileyo likaZoroastrian), un-Islamic.
Ahlulekile. Iholide inene kakhulu kwiinkcubeko zakwa-Iranian, zintanda kwaye zivuya kakhulu ngokunjalo, ukukhothamela udaka lwe-ayatollah.
Ngo-2006, urhulumente uzame ukugubha umkhosi wokulila, ukhuthaza abantu base-Irani ukuba bangabonakali uvuyo kuba iholide yawa ngomhla wama-40 emva komhla wokufa kuka-Imam Hussein. Ama-Irani ayengathobeli loo fowuni, kwakhona, ecetyisa ukuba ukubhiyozelwa kweNorwuz kuthathe i-subtext engaphezulu kwezopolitiko kunokwakheka kwesoko. "Ndicinga ukuba le mihla, ukuxhathisa e-Iran, ngokukodwa phakathi kwinqanaba eliphakathi," uHamidreza Jalaipour, isazi senzululwazi, watshela iThe New York Times ngaloo nyaka. "Abaxhatshazo kwezopolitiko, kodwa behlala kunye neentlanga."
I-Bonfires, ukuhlanjululwa kwentwasahlobo ebizwa ngokuba yiKhoune Takouni (oku kuthetha ukuba "ukugubha indlu"), ukuthenga nokugqoka iimpahla ezintsha kunye neetekese, kunye nokuxhuma phakathi kwezindlu zabahlobo kunye nosapho zonke ziyingxenye yesithethe se-Nowrūz.
Nangona iholide ngokukhethekileyo yasePersi, i-Nowruz yayigubungelwa yimiphakathi yasendulo yaseMesopotamia esuka eSomer eya eBhabhiloni, ukusuka e-Elam ukuya e-Akkad. Kwathonya ubuKrestu, ubuYuda kunye nobuSulumane (inkolo nganye inamathelisi ehlukeneyo kwiingcamango zobumnyama, ukukhanya nokuzalwa kwakhona) kwaye namhlanje ibhiyozelwa e-Afghanistan, eTurkey, eKurdistan nangaphezulu.
Ngomhla wama-Matshi 22, 1930 e-The Times ndafumana ngamanqaku enkcazo indlela iMithetho yasePersi e-wasghington yayigqithise ngayo iholide ngokubhiyozela apho izikhulu zeso sixeko zazivame ukunyulwa . Loo nyaka, nangona kunjalo, ukubhiyozelwa kweso sigwebo kuye kwachithwa ngenxa yokufa kwe-Rotundity yakhe, uMgwebi oyiNtloko uWilliam Howard Taft.
IQuran ithi ntoni ngoYesu?
Inkolelo yamaSulumane ngokuzalwa kukaYesu
I-Etiquette Iingcebiso zokutyelela iMosque njengengewona umSulumane
Imibuzo Ebuzwa Ngokuphindaphindiweyo malunga nokuShatshazwa ngokwesondo kunye nokuShatshazwa
Ukusebenza ngokuthe ngqo kwiVB.NET
Iimpapasho ezili-10 ezigqithisileyo ezithandekayo kakhulu
Amaziko asekhaya kunye neDysgraphia
Indlela yokukhupha i-Urchin Sea uhamba ngeenyawo zakho
Iintaba: Iibhola zeGalati zokuqala eziQinisekayo
I-Newsela inikela ngeeNkcukacha zoLwazi kuzo zonke iiNqanaba zokuFunda